Abe Telecel International Badinga Ukuvimba Ukwesulwa kweLicense Yabo eZimbabwe
UMnmzana Supa Mandiwanzira
Abaqondisi benkampani kamakhalekhukhwini eyeTelecel Zimbabwe International bakhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ngoLwesibili kulandela ukumiswa ukusebenza kweLicense yokusebenza elizweni.
Ekhuluma edale lephalamende lamhlanje ephendula imibuzo yamalunga aleli dale, umpathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku umnumzana Supa Mandiwanzira uthe iLicense le imiswa ukusebenza ngoba linkampani yehluleke ukulandela imithetho eqondisa ukusebenza kwamankampani akwamanye amazwe eZimbabwe ebalisa owe Indigenization.
Lumthetho uthi abakwamanye amazwe kumele babe lamashares aphansi kwesilinganiso sokungamatshumi ekhulwini-49%. Okwamanje iTelecel International ilamashare ayisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini.
Eyinye imbangela yokwesulwa kwale iLicense yisikhwelede linkampani elaso kuhulumende sezigidi ezilikhulu lamatshumi amathathu lasikhombisa zamadollar-$137, yenelisa ukuhlawula izigidi ezilitshumi lane kuphela zamadollar-$14 million kusukisela ngomnyaka ka2013.
Amalunga edale lephalamende abe ekhala ngokuthi ukumisa ukusebenza kweLicense le, akuphazamisi ukusebenza kwale inkampani kuphela kodwa lamasebenzisa omakhalekhukwini beTelecel kanye lokulahlekelwa umsebenzi kwabantu abedlula inkulungwane, lohulumende ehluleke ukuthola imithelo.